Voka-pifidianana: lasan’ny IRK ny ben’ny Tanàna amin’ny renivohi-paritra | NewsMada
Voka-pifidianana: lasan’ny IRK ny ben’ny Tanàna amin’ny renivohi-paritra
Nataon’ny IRK telimoka avokoa ny ankamaroan’ireo renivohi-paritra na tanàn-dehibe amin’ny fahazoana ny toerana maro eo amin’ny ben’ny Tanàna. Na izany aza, nahatafiditra ben’ny Tanàna koa ny tsy miankina sy ny Tim…
Anisan’izany ny eto Antananarivo Renivohitra amin’ny nahavoafidy an’Andriantsitohaina Naina, nahazo ny 49%. Hanao ny famindram-pahefana amin’ny ben’ny Tanàna teo aloha, etsy amin’ny lapan’ny Tanàna, ny alakamisy ho avy izao ny tenany. Vehivavy kosa ny IRK voafidy ao Fianarantsoa, amin’ny alalan-dRatsimbazafy Sahondra. Nibata ny 45% izy raha laharana faharoa ny Tim ary any amin’ny fahatelo ny ben’ny Tanàna HVM teo aloha, nirotsaka amin’ny mahaleo tena i Harilalaina Irma. Ny mpanakanto Nantenaina kosa no ben’ny Tanàna avy amin’ny IRK ao Toamasina, nahazo ny 34% raha laharana faharoa ny MTS, Ratsiraka Roland, 32%. Mbola tafaverina amin’ny toerany ary nahazo salanisa ambony 66% ny ben’ny Tanànan’i Mahajanga teo aloha, Andriantomanga Mokhtar Salim.
Tsy miankina ny ao Antsiranana, Nosy Be…
Mbola an’ny IRK koa ny ben’ny Tanàna ao Toliary amin’ny alalan’i Vita Sidison Dede. Tahaka izany ny any Taolagnaro, nahazo 64% ny avy amin’ny IRK, Randrianiaina Georges Mamy.
Lasan’ny tsy miankina kosa anefa ny ao Antsiranana ary mbola voafidy fanindroany amin’izany toerana izany i Djavojozara Jean Luc, nahazo 50%. Avy amin’ny mahaleo tena koa ny any Nosy Be, amin’ny alalan’i Vita Golbert.
Etsy an-daniny, votsotra teo an-tanan’ny Tim ny ao Antsirabe. Lasan’ny IRK Rasamimanana Honoré Gabriel izany tamin’ny nahazoany ny isam-bato 55% raha 29% ny vaton’ny ekipan-dRavalomanana, Randrianarisoa Guy Rivo.
Lasan’ny Tim ny eny Ambohitrimanjaka, Ivato…
Ankoatra izany, norombahin’ny Tim avokoa ny ben’ny Tanàna amin’ireo hanatanterahana ny tetikasa Tana-Masoandro. Anisan’izany ny eny Ambohitrimanjaka, amin’ny alalan-dRandriamanalintsoa Ihajason nahazo vato 47%. Mbola samy Tim avokoa ny eny Ankadimanga sy Ambohidrapeto. Nahazo 33% sy 43% avy Razafinanja Befandroana sy Andriantsilavo Mihary. Tanàna stratejika mbola lasan’ny Tim koa ny eny Ivato ary mbola nametrahan’ny vahoaka fitokisana tamin’izany i Penjy Randrianarisoa rehefa nahazo 59% raha 31% ny an’ny IRK, Rasoamiaramanana Goddfrin.
Tsiahivina fa haverina afaka 120 andro kosa ny fifidianana ben’ny Tanàna ao Moramanga, araka ny didim-pitsarana navoakan’ny Taf Toamasina. Nandresy vonjimaika ny Tim any an-toerana raha ny voka-pifidianan’ny Ceni.